Manchester United oo suuqa ka baadi-goobeysa xiddig beddel u noqda Aaron Wan-Bissaka… (Yaa la la xiriirinayaa iminka?) – Gool FM
(Manchester) 06 Okt 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay xiddig ka ciyaara booska dadabka midig ee daafaca suuqa ka baadi-goobeysa sida uu ku warramayo warsidaha 90min.
Red Devils ayaa doonaysa inay gacanta ku soo dhigto xiddig booska lambarka labaad ka ciyaara oo tartan geliya Aaron Wan-Bissaka.
Shabakadda 90min ayaa daabacday in Kooxda Manchester Uniteed ay xiddig cusub oo dadabka daafaca midig ka ciyaara ay suuqa ka raadinayso ayna doonayso inay gacanta ku soo dhigto marka dib loo furo suuqa kala iibsiga xiddigaha bisha Janaayo ee sanadka cusub.
Kooxda lagu naynaaso Red Devils ayaa haatan waxaa booskaas dooqa koowaad uga ah Aaron Wan-Bissaka, waxaana ay dareensan yihiin inay u baahan yihiin xiddig kale oo booskaas ka ciyaara oo tartan ku bilaabashada safka hore ah geliya Wan-Bissaka.
Xiddiga kooxda Rangers ee Nathan Patterson iyo midka Naadiga Norwich ee Max Aarons ayaa ah labada magac ee haatan la la xiriirnayo Man United oo ay midkood doonayso inuu tartan geliyo Aaron Wan-Bissaka.
Donny van De Beek oo aan ku billaaban doonin safka hore inta uu Ole Tababare u yahay Manchester United… (Sidee wax u jiraan?)